मनोरंजन Archives - Mero Khabar Nepal
अति मर्मिक गित अधुरो म।या
ढिला आयो तर रातो गलबन्दी आयो ..
काठमाडौं -समाजीक प्रेमकथामा निर्माण गरिएको फिल्म ‘रातो गलबन्दी’ को फस्र्टलुक पोस्टरसँगै शीर्ष गीत सार्वजनीक गरिएको छ । साउन १७ गते प्रदर्शन हुने फिल्ममा केकी अधिकारी, कोसिस क्षेत्री र बुद्धि तामाङ मुख्य भूमिकामा छन् । नवनिर्देशक अनिश थापाको निर्देशनमा बनेको फिल्मको सार्वजनीक पोस्टरमा केकी, कोसिस र बुद्धिलाई हाइलाइट गरिएको छ । हिमाल कडरिया र दुर्गा बस्नेत निर्माता रहेको फिल्मको शीर्ष गीतमा राजेश पायल राई र श्रेया राईको स्वर छ । गोबिन्द राईले कोरियोग्राफी गरेको गीत लोकराज अधिकारीले लेखेका हुन भने संगीत बिनोद खुम्बुले सृजेका हुन । मनिसमा फिल्मस्को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको स्क्रिप्ट किरण माइकलले लेखेका हुन् । हिमाल कडरियाको कथा रहेको फिल्मको सहनिर्माता बासुदेव घिमीरे,अमृता मगैराम र कृष्ण घिमीरे तथा प्रकाश दुलाल कार्यकारी निर्माता छन् । निर्देशक थापा ‘रातो गलबन्दी’ भरपुर मनोरञ्जनका साथै
सबै दशक हरुको मन मुटुमा बस्न सफल गित यदि तपाईं हरु नसुनेको भय यक पटक सुनैपर्न्रे छ
शब्द शब्दमा डबल मिनिङ्ग बोल्ने सफारी चालक, मन बिनाको धन गाउदा सबै हासेर बेहोस…(हेर्नू होस भिडियो सहित)
ऋतिक र टाइगरको घम्साघम्सीले भरिएको फिल्म ‘वार’को ट्रेलर हेर्नुहोस्, जुन दृश्यमा छ बिल्कुलै नयाँपन (भिडियो)
बलिउड स्टार ऋतिक रोशन र टाइगर श्राफ अभिनित फिल्म वार’ को टिजर सार्बजनिक भएको छ । सार्बजनिक टिजरमा टाइगर , ऋतिक र बाणीको अभिनय रहेको छ । यश राज फिल्म्सको प्रस्तुतिमा तयार पारिएको यस फिल्मको टिजर सोमवार सार्वजनिक गरिएको हो । फिल्म वार’मा ऋतिक र टाइगरको घमासान युद्ध देखाइएको छ । सिद्धार्थ आनन्दको निर्देशनमा बन्न लागेको यस फिल्म अक्टोवर २ मा रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ । आदित्य चोपडाको निर्माणमा तयार भएको यस फिल्ममा टाइगर , ऋतिक र बाणीको मुख्य भुमिका रहेको छ । हेर्नुहोस् टिजर https://youtu.be/XkHV7ROmIVA
फुलन्देकी आमा र लट्टेको तिज गीत “ओली बाको रेल”(भिडियो सहित)
पुश्कल शर्मा को “नक्कले” यूटुब उत्कृष्ट सुचीमा –भिडियो
लोकप्रिय गायक पुश्कल शर्माको यो बर्षको तीज गीतले धमाका मच्चाएको छ । गीत सार्वजनिक भएको छोटो समयमै उत्कृष्टको सूचिमा समेत पर्न सफल भएको छ । गीतलाई सबैले मन पराइ दिए पछि हामी सँग कुरा गर्दै शर्माले गीतलाई सबैले माया गरिदिएको प्रति धन्यवाद ब्यक्त गर्नु भयो । यो समाचार तयार पार्दा सम्म गीतले एक लाख ६६ हजार भन्दा धेरै दर्शक बनाएको छ । माया प्रेममा आधारीत सो अल्लारे बोलको गीतको सबै पक्ष निकै उत्कृष्ट रहेको छ । यस अगाडिको बर्षहरुमा समेत शर्माका गीतले सबैको मन जितेका थिए । यो गीतलाइ पनि सबैले मन पराइदिने मा आफु आशावादी रहेको बताउनु भयो । पुश्कल शर्मा देबी घर्ती र शान्ता शाहीको आवाज रहेको सो गीतमा पुश्कल शर्मा,सारीका केसी, सरापे र फुलन्देको आमाको अभिनय रहेको सो गीतलाइ काजिश श्रेष्ठले निर्देश गरेका छन । गीतको पुरै भिडियो हेर्नुस् अनि शेयर गर्नुहोस । https://youtu.be/j-8bLXrlwHU
‘ओ प्रिय’ सार्वजनिकः राहुल र आँचलकाे राेमान्स…(हेर्नुहाेस् भिडियाे)
मेरो नयाँ तिज गित आफ्नो त मन छ म।ईति घर तिरै बजार मा उपलब्ध छ मेरा कमि कमजोरी हरु बताउ अनुरोध गर्द्छ
भद्रगोलकी मुन्नीको एकै भाग बाट चुलियो चर्चा को हुन उनी ? छन यती हट (फोटोफिचर)
काठमाडौं । चर्चित नेपाली हाँस्य श्रृंखला भद्रगोलका पछिल्लो एपिसोडमा नयाँ कलाकारको इन्ट्री भएको छ ।एनटिभीबाट प्रशारण हुने भद्रगोलमा मधेसी लवजमा बोल्ने मुन्नी नामको क्यारेक्टरको इन्ट्री भएको हो । को हुन् त मुन्नी ? मुन्नी थिएटरकी कलाकार हुन् । उनले थुप्रै नाटकमा अभिनय गरेकी छिन् । उनको वास्तविक नाम प्रियाना आचार्य हो । भद्रगोलमा उनको सुन्दरता र अभिनयलाई निकै दर्शकले रुचाएका छन् ।युट्युवमा अपलोड गरिएको भद्रगोलको पछिल्लो श्रृंखलामा अधिकांश दर्शकले मुन्नीमाथि नै केन्द्रित भएर कमेन्ट गरेका छन् । अधिकांश दर्शकले उनको मज्जाले तारिफ गरेका छन् । हेर्नुहोस् प्रियानाका केही तस्विरहरुः